Isikhwama Sokuhamba se-Duffel Esiphathekayo
Kunezitayela eziningi zezikhwama ze-gym duffle, ezifana nojosaka, izikhwama zesithunywa, izikhwama, njll. Okokuqala, kufanele ucacise ukuthi yisiphi isitayela osithandayo. Ngokuvamile, amadoda kufanele akhethe amahlombe aphindwe kabili, alula ukuwaphatha.
Isikhwama semithwalo yemithwalo eqinile ehlala isikhathi eside enesihlangu sezicathulo
Yini i-duffle? Isikhwama se-duffle, sibizwa nangokuthi isikhwama sokuhamba, isikhwama semithwalo, isikhwama sokuzivocavoca, futhi senziwe nge-oxford, nyon, polyester nendwangu yokwenziwa. Abantu bathanda ukuyisebenzisa ukuhambela, ezemidlalo nokuzijabulisa ngabantu.
Isikhwama Esikhulu Sokugcoba Inayiloni
Uma ufuna umsebenzi osindayo nesikhwama sokuwasha esikhulu esengeziwe, lesi sikhwama sesitayela sokuwasha sikulungele. Lolu hlobo lwesikhwama lungagcina izingubo zezingcezu ezingama-20 kuye kwangama-30. Idizayini ephezulu ukuvala izintambo, yini engagcina izingubo zakho esikhwameni sokuwasha.
Lesi sikhwama esikhwameni sokuhlanza senziwe nge-polyester, eqinile futhi eqinile. Ayinamanzi futhi iyagezwa ngomshini. Ukuthungwa okuqinisiwe kujoyini ngalinye kuqinisekisa ukuthi izingxobo azidabuki kalula futhi kube lula ukuthutha ngesisindo esingeziwe.